MKPEBI NKE DISKI IKE (HDD) SITE NA ỤDA - DISK - 2019
Ná mmalite nke isiokwu ahụ, naanị m chọrọ ikwu na disk diski bụ ngwaọrụ ngwaọrụ na ọbụlagodi 100% disk na-enweghị ike ịmepụta ụda n'ọrụ ya (otu ntụgharị ụda mgbe ị na-etinye isi magnet). Ee na ị nwere ụdị ụda (karịsịa ma ọ bụrụ na diski ahụ dị ọhụrụ) nwere ike ọ gaghị ekwu ihe ọ bụla, ihe ọzọ bụ ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ọ bụla, ma ugbu a ha apụtawo.
N'okwu a, ihe mbụ m nwere ike ikwu bu idetuo ozi niile dị mkpa site na diski na mgbasa ozi ndị ọzọ, wee gaa usoro maka ịchọta HDD ma weghachite ọrụ nke faịlụ ahụ. N'ezie, ịkọ ụda nke draịvụ ike gị na ụda e nyere na isiokwu - nke a abụghị nchọpụta 100%, ma ọ ka dị ukwuu maka nsonaazụ mbụ ...
Iji mee ka ọ ghọtakwuo ihe kpatara ụda dị iche iche si "diski ike", nke a bụ ntakịrị nseta ihuenyo nke draịvụ ike: otu esi ele ya anya.
Winchester si n'ime.
Seagate HDD ụda
Ụda si na-arụ ọrụ ike mbanye Seagete U-usoro
Na-akụda ụgbọ mmiri Barracuda nke siri ike kpatara site na nkwụsị nke ụda isi.
Na-egbusi ụgbọ mmiri na-adọkpụ nke mmiri na-akpata, bụ nke kpatara ụbụrụ nke magnetic isi.
Agbaaka ike Seagate na mkpịsị agbaji na-agbalị imebi.
Egwuregwu siri ike Seagate na laptọọpụ na ọnọdụ ndị dara ogbenye na-emepụta mkpọchi na ịpị ụda olu.
Seagate diski ike na isi na - eme ka ụda na clicks na mkpọka.
Ụda nke Western Western Hard Hard Drives (WD)
Kpoo WD draịva siri ike, nke kpatara ụbụrụ na-arụ ọrụ nke isi ngwaọrụ.
WD laptọọpụ arụmọrụ na-akpa ike na - agbasi mbọ ike, na-eme ụda olu.
WD Winchester na diski 500GB na ihe ojoo ojoo - ya kpoo oge ole na ole wee kwusi.
WD dọrọ ike na ọnọdụ isi ala (ụda na-akpụ akpụ).
Ụda nke Samsung Winches
Ụda mere site na arụmọrụ siri ike nke Samsung SV.
Ntuchi nke sistem SV-usoro siri ike, kpatara site na nkwụsị ọrụ nke isi ngwaọrụ.
Ụdị Dọks Ịgba Ọsọ
Ụda nke a na-arụ site na ịrụ ọrụ ike na-arụ ọrụ zuru ezu QUANTUM CX
Ntu aka nke ike dọrọ VANTUM CX kpatara site na nkwụsị nke nchịkọta isi magnet ma ọ bụ mebie ụdọ Philips TDA.
Ntu aka nke diski ike QUANTUM Plus AS, kpatara site na nkwụsị nke ngọngọ nke isi magnet.
Ụda nke ihe eji arụ ọrụ MAXTOR
Ụda sitere na arụmọrụ siri ike "akwa ụdị" (DiamondMax Plus9, 740L, 540L)
Ụda sitere na arụmọrụ HDD "arụmọrụ" (DiamondMax Plus8, FireBall3, 541DX)
Ntu aka nke akwa ụdị (DiamondMax Plus9, 740L, 540L), kpatara site na nkwụsị nke ngọngọ nke isi magnet.
Kpoo ụdị ihe dị mkpa (DiamondMax Plus8, FireBall3, 541DX), kpatara site na nkwụsị nke ngọngọ nke isi magnet.
IBM Winches ụda
Ụda nke mbanye anataghị ikike IBM na-enweghị nkwụsị na nlọghachi, mgbe nke a na-eme ma ọ bụrụ na onye njikwa ahụ adịghị njọ.
Ụda nke mbanye anataghị ikike IBM na-enweghị nlọghachị, na-emekarị n'ọnọdụ nke dochie onye nchịkwa na nzere nke nsụgharị ozi ozi.
IBM Winchester dara ụda mgbe kọntaktị n'etiti onye nchịkwa na HDA agbajiri ma ọ bụ BAD blocks dị.
Ụda nke a na-arụ site na arụmọrụ siri ike IBM.
IBM ike mbanye kụrụ aka kpatara malfunction nke isi unit.
FUJITSU ụda olu ike
Ụda draịvụ ike FUJITSU, na nkwụsị nke ntọala ntinye, bụ naanị na ụdị MPG3102AT na MPG3204AT.
Ụda nke a na-arụ site na ịrụ ọrụ ike mbanye Fujitsu.
Kwụsịa ike ụgbọala FUJITSU, kpatara site na nkwụsị nke ngọngọ nke isi magnet.
Nyocha nke ala nke diski ike site na iji S.M.A.R.T.
Dị ka e kwuru na mbụ, mgbe ọdịdị nke ụda enyo na - apụta - detuo data dị mkpa site na draịvụ ike na mgbasa ozi ndị ọzọ. Ị nwere ike ịga n'ihu iji nyochaa ọnọdụ nke diski ike ahụ. Tupu ịmalite ịkọwa akaebe nke ule ahụ, ka anyị malite site na mkpesa S.M.A.R.T. Kedu ihe ọ bụ?
S.M.A.R.T. - (English Self Monitoring Analyzing and Reporting Technology) bụ nkà na ụzụ iji nyochaa ọnọdụ nke diski ike na ngwa ngwa nke ịchọpụta onwe ya, yana usoro maka ịkọ oge ọdịda ya.
Ya mere, e nwere ihe ọrụ ndị na-enye gị ohere ịgụ na nyochaa àgwà nke S.M.A.R.T. Na nke a, m ga - atụle otu n'ime ihe kachasị mfe iji jikwaa - ndụ HDD (M na - atụ aro ka ị gụọ ihe gbasara edemede HDD na usoro "Victoria" -
Onye Mmepụta: //hddlife.ru/index.html
OS Windows akwadoro: XP, Vista, 7, 8
Kedu ihe bara uru a? Eleghị anya, ọ bụ otu n'ime ihe doro anya: ọ na-enye gị ohere ịme ngwa ngwa na ngwa ngwa ịchịkwa akụkụ kachasị mkpa nke draịvụ ike. Enweghi ike ka onye ọrụ ahụ mee ihe ọ bụla (dịka enweghị nkuzi na nkà pụrụ iche). N'ezie, dị nnọọ wụnye ma na-agba ọsọ!
Foto dị na laptọọpụ m bụ nke a ...
Ike mbanye nke laptọọpụ: arụ ọrụ maka ngụkọta nke ihe dịka otu afọ; ndụ nkata dị ihe dịka 91% (ya bụ, maka afọ 1 nke ọrụ a na-egbochighị - - 9% nke "ndụ" na-eri, ma ọ dịkarịa ala afọ 9 ọzọ na ngwaahịa), arụmọrụ ahụ dị mma (ezigbo), ikuku disk dị 39 oz. C.
A na-eme ka ọrụ ahụ dị na njedebe ya na tray ma nyochaa akụkụ nke draịvụ ike gị. Dịka ọmụmaatụ, n'oge okpomọkụ n'oge okpomọkụ, disk nwere ike ịkọwa ihe HDD Life ga-agwa gị ozugbo (nke dị ezigbo mkpa!). Site n'ụzọ, e nwere usoro ntọala na asụsụ Russian.
Nhọrọ nke bara uru bụ ikike ịmepụta ụgbọala "site n'onwe ya": dịka ọmụmaatụ, iji belata mkpọtụ na ịgbawa, ma, ọ bụ ezie na arụmọrụ ga-ebelata (ị gaghị ahụ ya anya). Tụkwasị na nke ahụ, enwere ọnọdụ ike ike disk (anaghị akwado mbelata ya, ọ nwere ike imetụta ọsọ nke ohere data).
Nke a bụ otú HDD ndụ na-adọ aka ná ntị banyere ihe dị iche iche njehie na ihe ize ndụ. Ọ bụrụ na ohere dị obere na diski (ọma, ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ na-arị elu, ọdịda ga-eme, wdg), ọrụ ahụ ga-agwa gị ozugbo.
Ndụ nke Hdd - ịdọ aka ná ntị maka ịgbapụ nke ohere na diski ike.
Maka ndị ọkachamara nwere ahụmahụ, ị ​​nwere ike ịlele àgwà S.M.A.R.T. N'ebe a, a na-asụgharị àgwà ọ bụla n'asụsụ Russian. N'ihu nke ihe ọ bụla bụ ọnọdụ na pasent.
Ya mere, n'iji HDD Life (ma ọ bụ ụdị ọrụ ahụ), ị nwere ike ịlele akụkụ dị mkpa nke draịva siri ike (kachasị mkpa, chọpụta banyere ọdachi na-abịanụ na oge). N'ezie, m na-agwụcha na nke a, niile ọrụ siri ike nke HDD ...